စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 483
ကြယ်သီးတိုင်းပြည် (ရွှေသွေးဂျာနယ်) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၁၉၇၈ ဇာတ်လမ်း တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း၊ ပန်းချီ ဦးဘကြည် မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ (အဲသည်တုန်းက ရွှေသွေးဂျာနယ်ကို ဖတ်ဖူးသူ ပရိသတ်တွေထဲမှာ ရှိသေးလား) No tags for this post.
နှစ်သစ်ဆုတောင်း မာမာအေး၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ တနှစ်ကူးပြီလေ ပုရစ်ဖူး တဝေေ၀နဲ့ ပိတောက်လေ လှိုင်လှိုင်နှောပါတဲ့ ချစ်သော မြေ။ ရွှေမြန်မာ သာစေရောရယ်နဲ့ နှိမ်ချွေကာ မေတ္တာပိုိ့လိုက်ရဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့အစည်းစည်း တစုတည်းညီညာ ငြိမ်းချမ်းစွာ တူယှဉ်တွဲ ပြည်သူထဲကို ၀င်လေ။ ဒို့အဖေ၊ ဒို့အမေ ဒို့အမျိုးသား၊ ဒို့ဘိုးဘွား ၊ အမွေအနှစ် မြန်မာပြေ။ တိုးစေ ပွားစေ အားသစ်မယ့် သားအနှစ် ဂုဏ် အညီပေ နေကြစေ တဆွေမှ တဆွေ ပြည်အလှဝေ လှပါစေ။ ။ No tags for this post.
မရှိတော့တဲ့ကောင်းကင် ဇေမှိုင်း၊ ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၃ လက်ဖ၀ါးပေါ်က မြှားကိုဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ ဒဏ်ရာတွေ ပေါ်ကုန်မှာစိုးလို့လက်ဖ၀ါး ဓါတ်ပုံမရိုက်ရဲတာပါ..။ အလုပ်တွေ အများ……ကြီးလုပ်ခဲ့ရတာပါ လက်ဗွေ မပေါ်တာကတော့ မဆန်းပါဘူး မျက်မှောင်ကြီး ကြုတ်မကြည့်ပါနဲ့ကျုပ်လာတာ အညာမြက်တောရိုင်းတွေဆီက ကိုယ့်မြေကို ပြန်တောင်းနေတဲ့လူတွေဆီက သေချာတယ် ဘာစာတမ်းမှ မရေးဘူး သေချာတယ် ဘာမှတ်တမ်းမှမတင်ဘူး အမှန်ပါပဲ မှတ်တမ်းမဲ့ စာတမ်းမဲ့ တောင်သူတွေလေဗျာ ခဏခဏ ရင်ခုန်ကြတယ် ...
Zay Hmine – Emply Sky
အရှင်နန္ဒဝံသ (ဇေယျသုခဓမ္မရိပ်သာ) ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၃ သင်္ကြန် … သြော် သင်္ကြန် … နှစ်အကူး ရွှင်မြူးလေတဲ့ သင်္ကြန် .. တဲ့။ သီချင်းတွေလဲ ကြားဖူးရဲ့ … သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်နေကြသူတွေကိုလဲ တွေ့ဖူးခဲ့ပေမယ့် ‘သင်္ကြန်’ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို စေ့စေ့ငုငု ထဲထဲဝင်ဝင် ကျကျနနနားမလည်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ငယ်ရွယ်သူတွေက သိလိုရေးနဲ့ မေးလာတဲ့အခါ သူတို့ သဘောကျအောင် ဖြေစရာ သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။ဒါနဲ့ စာပေတွေထဲ သင်္ကြန်အကြောင်း တစေ့တစောင်းဆိုသလို ဖွေရှာ လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်ဟူသည် မြန်မာပြည်အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ ကျင်းပကြတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ “ကူးပြောင်းခြင်း”, “ပြောင်းရွှေ့ခြင်း”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ပါဠိဘာသာ “သင်္ကန္တ”၊သက္ကတဘာသာ “သင်္ကြန္တ”တို့ကို တိုက်ရိုက် မြန်မာမှုပြု၍...
ငါးများ
ဆောင်းလူ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ဟိုသွား ..ဒီသွား သင်္ကြန်တွင်းမှာ သူတို့ ရေယက်မလို ပါးဟက်မလို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် လမ်းမပေါ် တွားသွားနေလိုက်ကြတာ …။ပျော်ပျော်ကြီး မော်မော်ပြီး ရင်ခွဲရုံရောက်နေတဲ့ ပိတောက်တွေအစား ငုတွေက ဧည့်ခံ ရောက်လာတဲ့ ငါးတွေက ရေကသိုင်းရှုဖို့များ နက်ခ်တိုင်ကိုယ်စီနဲ့ စတိုင်လ်ကိုမိလို့ …။ ငါးတွေ ဇာတ်တူသားကိုမှ မြိန်ရည် ယှက်ရည် စားလိုသတဲ့ …။ ငါးတွေ တီတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ ဟိုးတုန်းကတော့ အိမ်လွမ်းလို့တဲ့ …။ ခုလည်း ကြည့် သူတို့ … လူမျှားချိတ်ကို လည်ပင်းချိတ် လူမျှားထွက်မလို့ နက်ခ်တိုင်ကိုယ်စီနဲ့ တွားသွားနေလိုက်ကြတာ …။ အော် … ငါးတွေ ခုတော့ .. ဥပုဒ်တဖက်နဲ့...
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ နှင့် ဟိုလော … သည်လော … (၁) ကျော်ငြိမ်းမိုး၊ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ (မြန်မာနိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည်) မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ထပ်တခါပြောလိုက်ရခြင်းမှာ ပြောလောက်ရသည့်အကြောင်းများ ရှိ၍လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သည်လို … ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်းက ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ တရားမျှတပါရဲ့လားတဲ့။ မြန်မာနိုငံဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကို တောင်းဆို၊ ကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည်လို့ တွေးခေါ်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်းက ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ တရားမျှတပါရဲ့လားတဲ့။ နောက်ထပ်ယူလာသေးတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုရဲ့စကားပဲ။ ဆိုလိုတာက...
တစ္ဆေခြောက်တဲ့ … ပိတောက်အိပ်မက် တင်ကိုမင်းညို ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ သွေးရိုးသားရိုး ပြောကြကြေးဆို အိမ်ရှေ့က စားပွဲပေါ်မှာ ပိတောက်တွေ မပွင့်တာကြာခဲ့ပြီ …။ဘယ်လောက်ထိ ဇာတ်ကနာသလဲလို့ဆိုရင် ဘုရားညောင်ရေအိုးကလည်း ပိတောက်ပန်းကို လွမ်းလို့ … ကလေးတယောက်နဲ့ မုဆိုးမဖြစ်နေရသူကလည်း ပိတောက်ဆိုရင် စိတ်နာသတဲ့ … ဘယ်တုန်းကမှ မျိုးရိုးမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ဟစ်ဟော့ပ် ဂီတနဲ့တောင်းစားနေရသူတွေကလည်း ဒီနှစ် အတာသင်္ကြန်မှာ ပိတောက်တွေပန်ပြီး တောင်းမတဲ့ သင်္ကြန်မိုးသီချင်းတွေ တိုက်လို့တဲ့ …။ ဘုရား … ဘုရား ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်သလဲဆိုတာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်လည်း နားမလည်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ … သူကိုယ်တိုင်က ဘုရား … ဘုရား တနေရသတဲ့ …။ လူတယောက် မိုးပေါ်က ဆင်းလာတယ် လက်တဖက်မှာ...
ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ၊ မောရစ်ကောလစ်၊ ချင်းတွင်းမှ ပင်လယ်သို့ ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ လူထုဒေါ်အမာရေးတဲ့ ချင်းတွင်းမှပင်လယ်သို့ စာအုပ် ၁၉၈၅ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂မှာ ထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ မောရစ်ကောလစ် နဲ့ လူထုဒေါ်အမာ တစ်သားထဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မောရစ်ကောလစ်ဟာ မြိတ်မှာ၂နှစ်ခွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး၊ ခွင့်ရက်ရှည် အင်္ဂလန်ပြန်ချိန်မှာ Samuel White စာအုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေရင်း၊ အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ပြန်မလာတော့ပဲ အလုပ်ကထွက်ပါတယ်။ စာရေးဆရာဘ၀ကို ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဒုတိယစာအုပ် Trial wasaQueen, တတိယစာအုပ်ကတော့ မြန်မာပြည်ကို အမှတ်တရ Trials in Burma စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုဒေါ်အမာ အသက်၂၃နှစ်အရွယ်မှာ ဘာသာပြန်ပြီး လုံးချင်းစာအုပ်ထုတ်ခဲ့တာ၊ တခဏတွင်းမှာ တတိယအကြိမ်အထိ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။...
ပုစ္ဆာတော၌ … ကံထွန်းသစ် ၊ ဧပြီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၃ ခုတလော စာမရေးဖြစ်။ အမိမြေက နှလုံးနောက်ကျုဖွယ်အာရုံတွေနှင့် မောလျနေခဲ့သည်။ မျက်စိ၊ နား၊ မနော သုံးပါးသော ဒွါရတံခါးတွေကနေ အလျင်မပြတ်ဝင်လာနေသည့် အာရုံခါးတွေ … အာရုံခါးတွေ … ။ မအူပင်ကွင်းဆီက သေနတ်သံတွေ၊ လက်ပံတောင်းတောင်ရိပ်က ငိုယိုရန်တွေ့သံတွေ၊ မိတ္ထီလာက မီးခိုးငွေ့တွေ၊ ဗလီကျမ်းစာသင်ကျောင်းက ကလေးငိုသံတွေ၊ ခုနောက်ဆုံး အင်ဒိုနီးရှား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းက ဗမာရေလုပ်သားလေးတွေရဲ့သွေးတွေ … တွေ … ။ ထိုအကြောင်းအရာတို့သည် မိုးလင်းမိုးချုပ် ခေါင်း၌ နေရာယူကြသည်။ ရင်၌တပ်စွဲကြသည်။ သည်တော့ စာပေရေးသားမှုကိုမဆိုထားနှင့်။ ပြုနေကျ နိစ္စဗဒ်တို့ပင် လစ်ဟင်းချင်ချင်၊ မေတ္တာ...
Page 483 of 563«1...481482483484485...563»
မောင်စိုးချိန် - ပဉ္စလက်အတတ်မာယာလေးဆယ်
ရွှေကူမေနှင်း - ဘကြီးအောင်ညာတယ်
ခင်ဇော်မိုး ● အပူလှိုင်းအားကြီး​သော ဇုန်​တ​နေရာ